Madaxweynayaasha Somalia iyo Eritrea oo saxiixay heshiis afar qodob ka kooban… – Hagaag.com
Madaxweynayaasha Somalia iyo Eritrea oo saxiixay heshiis afar qodob ka kooban…
Posted on 30 Luulyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa magaalada Asmara ku kala saxiixday heshiis ka koobkan afar qodob, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu soo gabagabeeyay booqashadii Saddexda cisho uu ku joogay.
War murtiyeed ayaa laga soo saaray heshiiska ay kala saxiixdeen labada Madaxweyne.
Iyadoo maanka lagu hayo xiriirka iyo saaxiibtinimada qotoda dheer ee labada
shacab ee Ereteriya iyo Soomaaliya, iyada oo dib loo millicsanayo xaqiiqada ah in shucuubta Soomaaliya iyo Ereteriya ay si joogta ah isu garab istaageen, isuguna taageereen halgankii mid kasta ugu jirey xornimada, madaxbannaanida iyo horumarka;
Iyada oo lagu salaynayo xiriirka walaaltinnimo ee taariikhiga ah iyo dedaalka ay labada dowladood ugu jiraan yagleelidda iskaashi labada dhinac ah, oo u faa’iidaynaya labada dal iyo guud ahaan gobolka.
Soomaaliya waxay ku taallaa goob istiraatiiji ah, waxayna leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwo aadmi iyo kuwo dabiici ah.
Laakiin, ka faa’iideysiga khayraadkaas waxa ka hor istaagey dhibaatooyinka gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi darteed, Ereteriya waxay si mug leh u taageereysaa madaxbannaanida siyaasadeed, qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si dalku u soo ceshado maqaamkii uu ku dhex lahaa dunida, loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya iyo Ereteriya waxay dedaal gelinayaan sidii ay u sameysan lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga.
Labada dal waxay yagleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyaga oo is dhaafsanaya danjireyaal, sarena u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda ah, sidoo kalena isweydaarsanaya fursadaha la xiriira waxbarashada iyo dhaqanka.
Ereteriya iyo Soomaaliya waxay si wadajir ah uga hawlgelayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasilloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka.